Ndị ọrụ na-akọ nsogbu na oku na OnePlus 7 Pro | Gam akporosis
The OnePlus 7 Pro na-enye nsogbu na oku ọdịyo maka ụfọdụ ndị ọrụ. Nsogbu ụda nke na-eme mkpọtụ na-akpasu iwe na-egbochi oku ndị ọrụ nke ekwentị gam akporo magburu onwe ya mere.
Anyị ejirila ụdị nsogbu a mgbe ekwentị ndị ọhụrụ na-arụ ọrụ na nke a na-emezikarị n'ime ihe ụbọchị ma ọ bụ izu na-emelite ngwa ngwa. Ọ bụghị oge mbụ anyị zutere nsogbu na OnePlus 7 Pro.
Ọ na-ama na-eme na phantom keystrokes na otu ekwentị nakwa na anyị chịtụrụ ụbọchị ole na ole gara aga tinyere ahịrị ndị a. Ugbu a ndị ọrụ ole na ole na-akọ mkpọtụ siri ike nke na-egbochi ahụmịhe gị mgbe ị na-akpọ site na ama a.
Ihe ọchị banyere ikpe a bụ na na OnePlus forums echiche na-emegiderịta onwe ha. Ọ bụ ezie na ụfọdụ na-adọ aka na ntị na mkpọtụ a adịla nso na ekwentị ha, ndị ọzọ enwebeghị ya n'oge ọ bụla ma ọ bụ naanị oge ole na ole.
Echere na nsogbu nwere ike ịbụ metụtara ụfọdụ ndị ọrụ,, ebe ọ bụ na ọ dị ka oke nsogbu a na-aka njọ karịa mgbe akpọrọ ndị ọrụ US n'aka AT & T. Ndị ọzọ hụrụ na edozi nsogbu ahụ mgbe ha nwetara mmelite ọhụrụ.
Ya mere, ihe kpatara nke a edoghị Ahụmahụ na-adịghị mma maka ụfọdụ ndị ọrụ OnePlus 7. Olileanya n'oge na-adịghị anya ị ga-ahụ ngwọta OnePlus ma dozie mkpọtụ ahụ na-ada ụda na oku na-akpọ na ekwentị a. Ekwentị anyị nwere na mba anyị ruo ọtụtụ ụbọchị ugbu a, nke ahụ abụrụla nke kachasị atụ anya site na gam akporo gam akporo n'onwe ya, nke chọtara OnePlus dị ka akara nke maara etu esi ebupụta igwe dị mma, jiri ezigbo atụmatụ yana ọnụ ahịa dị ukwuu ...
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Fọdụ ndị ọrụ OnePlus 7 Pro nwere ụda iwe na oku ọdịyo